सुन्दा सामान्य लाग्छ तर तामाको भाँडामा राखिएको पानी पिउनुका १० फाइदाको बारेमा जान्नुहोस् – Annapurna Daily
सुन्दा सामान्य लाग्छ तर तामाको भाँडामा राखिएको पानी पिउनुका १० फाइदाको बारेमा जान्नुहोस्
On Jan 1, 2022 387
हामीले पानी नियमित रूपमा पिउने गर्छौ, तर पानी पिउनुका फाइदाहरूबारे हामीमध्ये धेरै नै निकै अनभिज्ञ नै छौ। पानीले दिने फाइदाहरूबारे जानकारी लिनु शरिरलाई स्वस्थ राख्ने एउटा उपाय हुन सक्छ। मानिसलाई स्वस्थ रहनका लागि दिनमा कम्तिमा ८-१० गिलास पानी खानै पर्छ।आयुर्वेदमा भनिएको छ की बिहान तामाको भाँडोमा राखिएको पानी पिउनु निकै लाभदायक हुन्छ । तामाको भाँडोमा राखिएको पानी पिउनाले शरिरको कयौ रोगहरू बिना औषधी नै ठिक हुन्छ ।
साथै, पानीले शरिरको विषलाई समेत बाहिर निकाल्न सक्ने हुनाले पनि पानीको नियमित र प्रचुरमात्रामा प्रयोग आवश्यक हुन्छ।तामाको भाँडामा कम्तिमा ८ घण्टा राखिएको पानी निकै लाभदायक हुन्छ। जुन मानिसहरूलाई कफको समस्या बढि हुन्छ, उनीहरूले पानीमा तुलसीको केही पात राखेर पानी पिउनु राम्रो हुन्छ। तामाको भाँडामा राखेको पानी खानुको फाईदा केही मानिसलाई मात्र थाहा छ। तामाको भाँडामा राखेको पानी खानुका केही फाइदाहरू यस्ता छन् :
१. आयुर्वेदका अनुसार तामाको भाँडामा पानी खानाले तीनैवटा दोष (वात, कफ र पित्त) लाई सन्तुलित पार्ने क्षमता हुन्छ । तामाको भाँडामा राखिएको पानीलाई ‘ताम्रजल’ भनिन्छ । यसका लागि तामाको भाँडामा कम्तीमा ८ घण्टा राख्नुपर्छ ।२. तामाको भाँडामा पानी राख्नाले तामा बिस्तारै पानीमा मिसिएर सकारात्मक गुण प्रदान गर्छ । यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको यसमा राखिएको पानी कहिल्यै पनि बेस्वादको हुँदैंन । त्यसैले लामो समयसम्म तामाको भाँडामा पानी राख्न सकिन्छ ।
३. तामामा प्राकृतिक रुपमा ओलीगोडिनेमिकको रुपमा (ब्याक्टेरियामा धातुलाई स्टेरलाइज्ड) मानिन्छ । यसमा राखिएको पानीको सेवनले पेटमा भएको ब्याक्टेरिया सजिलै नष्ट गर्न सक्छ । यस्तै, पानीजन्य रोग डाइरिया, कमलपित्तजस्ता रोग रोक्न पनि उपयोगी मानिन्छ ।४. थाइरेक्सिन नामक हर्मोनको असन्तुलनका कारण थाइराइडको रोग लाग्छ । तामाको भाँडामा राखिएको पानी पिउनाले शरीरमा थाइरेक्सिन हर्मोन नियन्त्रित हुन्छ र यो हर्मोन निकाल्ने ग्रन्थीको कार्यप्रणालीलाई पनि नियन्त्रित गर्छ ।
५. तामामा मष्तिष्कलाई उत्तेजित गर्ने गुण हुन्छ । यो गुणको उपस्थितिमा मष्तिष्कले तीब्रता र कुशलतापूर्वक काम गर्न मद्दत गर्छ ।६. जोर्नी दुख्ने समस्या छ भने तामाको भाँडामा राखिएको पानी नियमित पिउनाले फाइदा हुन्छ । यसमा एन्टी इन्फ्लेमेटरी गुण हुन्छ ।७. यदि छाला स्वस्थ र सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने रातभर तामाको भाँडामा राखिएको पानी बिहान पिउनुहोस् । तामाले शरीरमा नयाँ कोशिकाहरुको उत्पादनमा मद्दत गर्छ । नियमित रुपमा यस्तोपानी पिउनाले छाला स्वस्थ र चम्किलो हुन्छ ।
८. एसिडिटी, कब्जियतजस्ता पेटका समस्या भएका मानिसका लागि तामाको भाँडामा राखिएको पानी अमृतसमान हुन्छ । आयुर्वेदका अनुसार यदि शरीरमा भएको विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्न चाहने हो भने तामाको भाँडामा कम्तीमा ८ घण्टा राखिएको पानी पिउनुहोस् । यसबाट पेट फुल्ने समस्या र पाचनप्रणालीका समस्या हट्छन् ।९. तामाको भाँडामा राखिएको पानी पिउनाले चाउरी पर्ने प्रक्रियालाई पनि ढिलो गराइदिन्छ । यसले नयाँ र स्वस्थ छालाको कोशिकाको उत्पादनमा पनि मद्दत गर्छ ।१०. यसले रगतको विकार र कमी हुने समस्या हट्छ । पोषक तत्वलाई शोषेर रक्तवाहिनी नलीहरुमा यसलाई नियन्त्रित गर्छ ।